June 9, 2022 - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
June 9, 2022 June 9, 2022 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: CRPH NUG PDF တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မှတ်ချက်ဆိုပြီးတော့ သတင်းတု ပျံ့နှံ့ခဲ့
CRPH NUG PDF တို့ဟာ တရားမဝင်ကြောင်းနဲ့ မူလ NLD ပါတီနဲ့မပတ်သတ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စစ်တပ်ကို ပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ ပို့စ်တစ်ခုဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူတွေအကြားပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ သတင်းတု သာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH)၊ အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ(NUG)၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(PDF)တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တစ်စုံတစ်ရာပြောကြားခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်မတွေ့ရှိရပါဘူး။ အောက်ပါစာသားတွေကတော့ ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိတဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပို့စ်ပါစာသားများဖြစ်ပါတယ်။ “အမေလာမှကျောင်းတက်မယ်ရုံးတက်မယ်ဆိုပြီးတောထဲရောက်အကြမ်းဖက်PDFလေးတွေကြားကြပြီလား ==================== နိုင်ငံတကာရောက်..တောတွင်းရောက်..NUG/pdf.တွေ သေလို့ရပြီ တရားမဝင်ကြောင်း..မူလNLD.ပါတီနဲ့မပတ်သက်ကြောင်း..ထောင်တွင်းနေ.ဒေါ်စုကြည်က..နစကကိုပြောကြားခဲ့. May..9..ရက်.NCA..နောက်ဆုံးရာဇသံက…NUG..pdf. တွေသွေးပျက်စရာ..ပြေးနိုင်လဲလွတ်မယ်မထင်…ဒေါ်စုကြည်၏ ယနေ့ပြောစကား CRPH ရှိပြီးသားကို ဘာလို့ NUG အဖွဲ့ PDF အဖွဲ့ထပ်ဖွဲ့နေရတာလဲ NLD ထိပ်ပိုင်းတွေအထဲရောက်နေသဖြင့် NLD လိုဂို NLD တံဆိပ်တုံးသုံးပြီးမည်သူမှ အမိန့်မထုတ်ရ သူတို့ပြန်မလာမချင်းမည်သူမှ ပြောဆိုရေးသားအမိန့်ထုတ်ခွင့်မရှိပါတီအတွက်မလုပ်ရဟု CRPH NUG PDF ကို ဒေါ်စုကြည်မှ အသိအမှတ်မပြုလက်မခံကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါသည် […]